Tag: waya | Martech Zone
N'ime ọnwa ole na ole gara aga, ọtụtụ azụmaahịa gbanwere n'ịzụ ahịa n'ịntanetị n'ihi COVID-19. Nke a hapụrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na obere ụlọ ọrụ na-achọ ịpụta atụmatụ dị ire ahịa dijitalụ, ọkachasị ụlọ ọrụ ndị ahụ dabere na ahịa site na ụlọ ahịa brik na-mortar. Ọ bụ ezie na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ ahịa na-ere ahịa, na ọtụtụ ndị ọzọ na-amalite imeghe ọzọ, ihe mmụta a mụtara n'ime ọnwa ole na ole gara aga doro anya - ịntanetị ga-abụrịrị akụkụ nke ihe niile
M chuckled ntakịrị mgbe m hụrụ nke a infographic n'ihi na, dị ka ọ na-enyo, M ga-abụ a graphic imewe noob. Ma, Ewoo, ọ bụ ihe ịtụnanya na-achọpụta ihe m amaghị banyere ụlọ ọrụ m agbakwunyere miri emi maka afọ 25 gara aga. Na m agbachitere, M naanị dabble na-arịọ ndịna. Obi dị anyị ụtọ na ndị na-ese ihe anyị maara ihe karịa gbasara m. Ikwesiri ima ihe di iche na etiti
Fraịdee, June 27, 2014 Thursday, June 26, 2014 Douglas Karr
Ekwetaghị m na m nwalere igwe injinị dị mfe karịa Fluid. N'ụzọ doro anya, ị ga-enye ndị nchịkọta akụkọ ha ule nyocha, ọ dị mfe nghọta, kensinammuo ma nwee pallet siri ike nke ịdọrọ na dobe njirimara ngwa ọrụ ndị na-adaba na ntanetị ma nwee oke ọgụgụ isi. Fluid nwere ngwa ọkpụkpọ omenala maka gam akporo, iPhone na iPad. Ha na-ahapụ gị ka ị wulite ihe ngosi ọtụtụ ihuenyo jikọtara, na-ebupụ ihuenyo ahụ, gbakwunye mmegharị na ntụgharị site na swipe, pịa,
Anyị na-niile e been gị na saịtị chọrọ ume. Ma obu ahia gi ka edeputara, saiti a abiala ochie, ma obu na o bughi igbanwe ndi ozo dika ichoro ya. Ndị ahịa anyị na-abịakwute anyị ka anyị nwekwuo ntughari ma anyị na-agakwa ịlaghachi azụ ma weghachite usoro nlekọta weebụ ha niile site na ịkọ aha ọdịnaya. Olee otú anyị si eme ya? A webusaịtị kewara n'ime igodo isii